Iindaba -Iipakethe ezininzi zenziwe ngeglasi okanye nge-acrylic？
Uninzi lweepakethe zenziwe ngeglasi okanye i-acrylic. Nangona kunjalo, kule minyaka idlulileyo, siye safumana ngakumbi nangakumbi iimveliso zezithambiso kwintengiso kusetyenziswa iibhotile zokuthambisa izilwanyana.
Ke kutheni ukupakishwa kwe-pet lotion kuthandwa kangaka? Okokuqala, iglasi okanye ibhotile ye-acrylic lotion inzima kakhulu, kwaye ubunzima abulungelanga ukuyiphumeza. Njengoko abantu abancinci behamba ngakumbi, iphakheji yebhotile yokuthambisa isilwanyana ilungele ukuphatha. Kukwaphatheka ngakumbi. Okwesibini, ngokunyuka kokuthengwa kwe-Intanethi, iibhotile ze-lotion zihlala ziphuka kunye nezinye iimeko ngexesha lothutho, ngelixa iibhotile ze-lotion ziyaphazamiseka, kwaye ukungqubana kunye nokukhutshwa ngexesha lokuhamba akuyi kubangela iingxaki njengokuqhekeka kunye nokuvuza.
Kwakhona, ukupakishwa kwebhotile yokuthambisa isilwanyana kulula ukuvelisa kunye nexabiso eliphantsi, ke iyathandwa. Yeyiphi imiba ekufuneka ndiyiqwalasele xa ndipakisha? Eyokuqala kukuba ngaba izinto zizinto ezintsha. Abanye abavelisi beplastikhi yokubumba baya kuthi basebenzise izinto eziziisekondari ukucwangcisa ibhotile ye-pet lotion, ngokucacileyo echaphazela umgangatho we-emulsion. Ke ngoko, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwimathiriyeli eluhlaza eveliswa ngabavelisi beebhotile zokuthambisa. Kwixabiso lesibini, iibhotile zokuthambisa zisetyenziswa ngobuninzi, ke kufuneka ulawule iindleko kangangoko kunokwenzeka xa usenza iodolo. Ke ngoko, kwinkqubo yokuthenga, kufuneka sizame konke okusemandleni ethu ukuthelekisa amaxabiso. Okwesithathu kukuzinza konikezelo lwabenzi beebhotile zokupakishwa kwebhotile, kwaye ukuhanjiswa kwangexesha kubalulekile kubalulekile kwinqanaba lokugqibela lomenzi weemulsion. . Ngokubanzi, ukupakisha into yokuthambisa isilwanyana kunamathuba amaninzi kwaye kunophuhliso olunamandla kunye nokhuphiswano kwintengiso.
Cream Jars Izithambiso Packaging, Isithambisi sePowder sePowder kunye neSifter, Ihowuliseyili cream Cream Jar, Iziqulatho zeCream cosmetic, Ijayi yeKhrimu yeLiso, Ibhotile emnyama yeGel Polish,